ဝင်မဖတ်ကြည့်ရင် သင်သိလိုက်မှာမဟုတ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က ထူးဆန်းစွာ ကွဲထွက်နေတဲ့ အရာများ… – အနုပညာရပျဝနျး
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ထူးဆန်း အံ့ဩဖွယ်ရာ တစ်ခုအကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဘယ်လို ထူးဆန်းတာမျိုးလဲဆိုတော့ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ သိသိသာသာ ကွဲထွက်နေတဲ့ အရာတွေ အကြောင်းပါ။ သေချာသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို အတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်….
၁။ ကြယ်ပုံစံ စတော်ဘယ်ရီသီး
စတော်ဘယ်ရီသီးတွေကို တော်တော်များများ ကြိုက်သလို သူ့ရဲ့ ပုံစံကိုလည်း သိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် စိုက်ခင်းတစ်ခုကနေ သီးခဲ့တဲ့ စတော်ဘယ်ရီသီးကတော့ တစ်ခြားစတော်ဘယ်ရီတွေလို မဟုတ်ပဲ ကြယ်ပုံစံလေး ထူးဆန်းစွာ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
၂။ ဧရာမ ကြက်သွန်နီကြီး
ကြက်သွန်နီလှီးရင် မျက်စိစပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အခုမြင်နေရတဲ့ ကြက်သွန်နီကြီးက တစ်ကယ့်ကို အိမ်မက်ဆိုးပါပဲ ။ သူ့ရဲ့အရွယ်အစားက ပုံမှန်ကြက်သွန်နီဥတွေထက် ၄ ဆ လောက်တောင် ကြီးနေပါတယ်။
၃။ လက်မတွေပါတဲ့ ကြောင်ကလေး
ကြောင်လေးတွေရဲ့ ခြေချောင်းတွေဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် သေးသေးသွယ်သွယ်လေး ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီကြောင်လေးကတော့ ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲ အရှေ့ခြေနှစ်ဖက်စလုံးမှာ လက်မလို ပုံစံလေးတွေ ပါနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ နေရာရွေ့သွားတဲ့ လမ်းမကြီး
အခုမြင်နေရတဲ့ပုံကတော့ မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လမ်းမကြီး ရွေ့သွားတဲ့ ပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မုန်တိုင်းအားက ဘယ်လောက်တောင် ပြင်းလဲဆိုတာ ရွေ့သွားတဲ့ ကတ္တရာအပြားလိုက်ကြီးကို ကြည့်တာနဲ့ သိသာနိုင်ပါတယ်။
၅။ ပင်စည်ကြီး လိမ်သွားတဲ့ သစ်ပင်
ဒီသစ်ပင်ကြီးကတော့ Tornado တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် သစ်ပင်ရဲ့ အလယ်လောက်ကနေ ပင်စည်က ရစ်ပြီး လိမ်သလို မျိုး ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်ထည်ကြီးမားတဲ့ ဒီလိုအပင်ကြီးကိုတောင် လိမ်သွားစေလောက်တဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Tornado ရဲ့ တိုက်ခိုက်နှုန်းကတော့ တစ်ကယ့်ကို လန့်စရာပါ။
၆။ ဘောလုံးတစ်လုံး အရွယ်အစားရှိတဲ့ မှိုလုံးကြီး
စိုက်ပျိုးရေးသမားတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ခြံထဲကနေ ထွက်တဲ့ ဧရာမ မှိုလုံးကြီးကို ရိုက်ထားတဲ့ ပုံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပင်ကြီးထွားဆေးကြောင့် မဟုတ်ပဲ သဘာဝအတိုင်းပေါက်ရောက်နေတာဖြစ်လို့ အတော်လေး ထူးဆန်းတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပါ။
တစ်ခါတစ်လေ စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ သဘာတရားနဲ့ ရောထွေးသွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခုလည်း စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ဖိနပ်တစ်ဖက်ဟာ နှစ်တွေအတော်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ အပေါ်ဖက်တစ်ခုလုံးကို ရေညှိတွေဖုံးအုပ်သွားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင် ဒီဇိုင်းအသစ်ထုတ်ထားတဲ့ ဖိနပ်လားလို့တောင် ထင်ချင်မိစရာပါ။
၈။ အရောင်ဆန်းတဲ့ ပုစဉ်းရင်ကွဲလေး
အခုမြင်နေရတဲ့ ပုစဉ်းရင်ကွဲလေးကတော့ သာမန်ပုစဉ်းရင်ကွဲတွေနဲ့ အရောင်မတူပဲ ထူးဆန်းတဲ့ အရောင်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်ပုစဉ်းတွေဟာ အညိုရောင်စပ်ကြာတာ များပေမယ့်လည်း ဒီအကောင်လေးကတော့ ထူးဆန်းစွာနဲ့ Neon အရောင်လေး ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
၉။ အရည်ပျော်သလိုဖြစ်နေတဲ့ သစ်ပင်အမြစ်
ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် ပုံထဲက သစ်ပင်ရဲ့ အမြစ်ဟာ အရည်ပျော်နေတာများလားလို့တောင် ထင်ချင်စရာပါ. တစ်ကယ်တမ်းကတော့ အရည်ပျော်နေတာမဟုတ်ပဲ သူ့အမြစ်ရဲ့ ပုံစံကိုက အခုလိုမျိုး ဖြစ်နေတာပါတဲ့….
၁၀။ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ ပင့်ကူအိမ်
ဒီပင့်ကူအိမ်ကို ဆောက်တဲ့ ပင့်ကူလေးကတော့ တစ်ခြား ပင့်ကူတွေထက်ပိုပြီး အမြင်ကျယ်သလားလို့တောင် ထင်ချင်စရာပါ။ သစ်ပင်တစ်ခုမှာဆောက်ထားတဲ့ ဒီပင့်ကူအိမ်လေးဟာ လှိုဏ်ခေါင်းပုံစံနဲ့ တော်တော်လေးကို တူနေပါတယ်။
အခုဖော်ပြပေးထားတာတွေကတော့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က သာမန်ထက်ကွဲထက်နေတဲ့ အရာတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း အခုလို ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ ‌စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော်…
အခုတဈခါမှာတော့ ပရိသတျကွီးအတှကျ ထူးဆနျး အံ့ဩဖှယျရာ တဈခုအကွောငျး ပွောပွပေးခငျြပါတယျ။ ဘယျလို ထူးဆနျးတာမြိုးလဲဆိုတော့ ပုံမှနျမဟုတျပဲ သိသိသာသာ ကှဲထှကျနတေဲ့ အရာတှေ အကွောငျးပါ။ သခြောသိခငျြတယျဆိုရငျတော့ အောကျကပုံလေးတှေ တဈပုံခငျြးစီကို အတူကွညျ့လိုကျရအောငျနျော….
၁။ ကွယျပုံစံ စတျောဘယျရီသီး
စတျောဘယျရီသီးတှကေို တျောတျောမြားမြား ကွိုကျသလို သူ့ရဲ့ ပုံစံကိုလညျး သိကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ စိုကျခငျးတဈခုကနေ သီးခဲ့တဲ့ စတျောဘယျရီသီးကတော့ တဈခွားစတျောဘယျရီတှလေို မဟုတျပဲ ကွယျပုံစံလေး ထူးဆနျးစှာ ဖွဈလို့နပေါတယျ။
၂။ ဧရာမ ကွကျသှနျနီကွီး
ကွကျသှနျနီလှီးရငျ မကျြစိစပျတဲ့သူတှအေတှကျကတော့ အခုမွငျနရေတဲ့ ကွကျသှနျနီကွီးက တဈကယျ့ကို အိမျမကျဆိုးပါပဲ ။ သူ့ရဲ့အရှယျအစားက ပုံမှနျကွကျသှနျနီဥတှထေကျ ၄ ဆ လောကျတောငျ ကွီးနပေါတယျ။
၃။ လကျမတှပေါတဲ့ ကွောငျကလေး
ကွောငျလေးတှရေဲ့ ခွခြေောငျးတှဟော ပုံမှနျအားဖွငျ့ သေးသေးသှယျသှယျလေး ရှိနတေတျကွပါတယျ။ ဒီကွောငျလေးကတော့ ထူးဆနျးစှာနဲ့ပဲ အရှခွေ့နှေဈဖကျစလုံးမှာ လကျမလို ပုံစံလေးတှေ ပါနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
၄။ နရောရှသှေ့ားတဲ့ လမျးမကွီး
အခုမွငျနရေတဲ့ပုံကတော့ မုနျတိုငျးဒဏျကွောငျ့ လမျးမကွီး ရှသှေ့ားတဲ့ ပုံပဲ ဖွဈပါတယျ။ မုနျတိုငျးအားက ဘယျလောကျတောငျ ပွငျးလဲဆိုတာ ရှသှေ့ားတဲ့ ကတ်တရာအပွားလိုကျကွီးကို ကွညျ့တာနဲ့ သိသာနိုငျပါတယျ။
၅။ ပငျစညျကွီး လိမျသှားတဲ့ သဈပငျ
ဒီသဈပငျကွီးကတော့ Tornado တိုကျခိုကျခံရပွီးနောကျ သဈပငျရဲ့ အလယျလောကျကနေ ပငျစညျက ရဈပွီး လိမျသလို မြိုး ဖွဈသှားခဲ့ရပါတယျ။ ကိုယျထညျကွီးမားတဲ့ ဒီလိုအပငျကွီးကိုတောငျ လိမျသှားစလေောကျတဲ့ ဖွဈခဲ့ရတဲ့ Tornado ရဲ့ တိုကျခိုကျနှုနျးကတော့ တဈကယျ့ကို လနျ့စရာပါ။
၆။ ဘောလုံးတဈလုံး အရှယျအစားရှိတဲ့ မှိုလုံးကွီး
စိုကျပြိုးရေးသမားတဈယောကျ သူ့ရဲ့ ခွံထဲကနေ ထှကျတဲ့ ဧရာမ မှိုလုံးကွီးကို ရိုကျထားတဲ့ ပုံပဲ ဖွဈပါတယျ။ အပငျကွီးထှားဆေးကွောငျ့ မဟုတျပဲ သဘာဝအတိုငျးပေါကျရောကျနတောဖွဈလို့ အတျောလေး ထူးဆနျးတယျလို့ပဲ ပွောရမှာပါ။
တဈခါတဈလေ စှနျ့ပဈလိုကျတဲ့ ပစ်စညျးတှဟော သဘာတရားနဲ့ ရောထှေးသှားတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ အခုလညျး စှနျ့ပဈထားတဲ့ ဖိနပျတဈဖကျဟာ နှဈတှအေတျောကွာတဲ့အခါမှာတော့ အပျေါဖကျတဈခုလုံးကို ရညှေိတှဖေုံးအုပျသှားရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အမှတျတမဲ့ကွညျ့လိုကျရငျ ဒီဇိုငျးအသဈထုတျထားတဲ့ ဖိနပျလားလို့တောငျ ထငျခငျြမိစရာပါ။
၈။ အရောငျဆနျးတဲ့ ပုစဉျးရငျကှဲလေး
အခုမွငျနရေတဲ့ ပုစဉျးရငျကှဲလေးကတော့ သာမနျပုစဉျးရငျကှဲတှနေဲ့ အရောငျမတူပဲ ထူးဆနျးတဲ့ အရောငျရှိနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ သာမနျပုစဉျးတှဟော အညိုရောငျစပျကွာတာ မြားပမေယျ့လညျး ဒီအကောငျလေးကတော့ ထူးဆနျးစှာနဲ့ Neon အရောငျလေး ဖွဈလို့နပေါတယျ။
၉။ အရညျပြျောသလိုဖွဈနတေဲ့ သဈပငျအမွဈ
ရုတျတရကျကွညျ့လိုကျရငျ ပုံထဲက သဈပငျရဲ့ အမွဈဟာ အရညျပြျောနတောမြားလားလို့တောငျ ထငျခငျြစရာပါ. တဈကယျတမျးကတော့ အရညျပြျောနတောမဟုတျပဲ သူ့အမွဈရဲ့ ပုံစံကိုက အခုလိုမြိုး ဖွဈနတောပါတဲ့….
၁၀။ ဥမငျလှိုဏျခေါငျး ပုံစံဖွဈနတေဲ့ ပငျ့ကူအိမျ
ဒီပငျ့ကူအိမျကို ဆောကျတဲ့ ပငျ့ကူလေးကတော့ တဈခွား ပငျ့ကူတှထေကျပိုပွီး အမွငျကယျြသလားလို့တောငျ ထငျခငျြစရာပါ။ သဈပငျတဈခုမှာဆောကျထားတဲ့ ဒီပငျ့ကူအိမျလေးဟာ လှိုဏျခေါငျးပုံစံနဲ့ တျောတျောလေးကို တူနပေါတယျ။
အခုဖျောပွပေးထားတာတှကေတော့ ကမ်ဘာကွီးပျေါက သာမနျထကျကှဲထကျနတေဲ့ အရာတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာလညျး အခုလို ထူးဆနျးတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ရှာဖှတေငျဆကျပေးမှာမို့လို့ ‌စောငျ့မြှျောဖတျရှုပေးကွပါဦးနျော…